‘बेरोजगार युवालाई तालिम मात्र होइन, रोजगारी नै दिने हाम्रो योजना छ’ - Jana Prashasan
हरिशंकर यादव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लक्ष्मिनियाँ गाउँपालिका, धनुषा
धनुषा जिल्लास्थित लक्ष्मिनियाँ गाउँका हरिशंकर यादव गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कार्यरत छन् । सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएका यादवले सर्वोदय मावि, पोडेश्वरबाट प्रवेशिका उत्तीर्ण गरे । धनुषा साइन्स क्याम्पस, जनकपुरमा उच्च मावि अध्ययन गरे र जनकपुरस्थित आरआरएम क्याम्पसबाट बीएससी उत्तीर्ण गरेपछि अब मिलेसम्म उच्चशिक्षा पनि अध्ययन गर्नुपर्छ र क्यारियर बनाउनुपर्छ भन्दै हरिशंकर देशको राजधानी आइपुगे । राजधानी आइपुगेपछि केमेष्ट्रीमा विषयमा त्रिवि पढ्न थाल्दा साथीभाइको लहलहैमा लागेर २०६८ मा अनुसन्धान विभागमा खुला रुपमा खोलिएको जागिरको परीक्षा दिन पुगे र त्यहाँबाट उनको जागिरको सुरुआत भयो । केही समय काम गरेपछि लोकसेवा आयोगबाट नासु पनि उत्तीर्ण गरे र राष्ट्रिय महिला आयोगमा तीन वर्ष छ महिनासम्म नासु बने । यो समयसम्म आइपुग्दा हरिशंकरले जनप्रशासनमा एमपीए र पोलिटिकल साइन्समा स्नोतकोत्तर उत्तीर्ण गरे । हालको प्रदेश नम्बर दुईका थुप्रै युवा कामको खोजीमा भारत जान्थे अनि अलिक हुनेखानेहरु ‘लाहुरे’ हुन अरबतिर लाग्थे । सम्पन्नहरुको त के कुरा उनीहरुको लागि युरोप–अमेरिका खुलै थियो । तर हरिशंकरलाई न विदेशी हावा, पानीले तान्यो न उनलाई राजधानीले रोकेर राख्न सक्यो । बरु उनलाई त धनुषाकै स्थानीय स्तरले तान्यो र २०७३ मा जब स्थानीय निकायहरुको शुरु भयो उनी शाखा अधिकृतको रुपमा धनुषाकै मुखियापट्टी मुसहरिया गाउँ पालिकामा प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा सेवा गर्न पुगे । लगातार अध्ययन, विशेष सेवा र निजामती प्रशासनको माथिल्लो ओहोदामा खारिएका यादवसँग जनप्रशासन पाक्षिकका लागि केदार आचार्यले गरेको कुराकानी :
नेपाल सरकारको प्रशासनिक सेवाअन्तर्गत स्थानीय निकायमा सर्वप्रथम ठूलो ओहोदासहित पुग्दा कस्तो अनुभव भयो, त्यहाँ भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कस्तो थियो ?
ठूलो ओहोदासहित भन्ने त्यस्तो घमण्ड ममा कहिल्यै भएन र अहिले पनि मैले त्यस्तो सोचेको पनि छैन । बरु आफूले सोचेको अध्ययन पूरा गरेपछि पनि आफ्नै जिल्लामा फर्कन पाउँदा अति नै गर्व लाग्यो । निश्चय नै म अधिकृतको रुपमा मुखियापट्टी मुसहरिया गाउँपालिकामा आउँदा त्यतिबेला त्यहाँ स्थानीय निकाय भन्ने बोलीमा मात्र सीमित थियो । व्यवहारमा न त्यहाँ भौतिक संरचना थियो, न त अन्य कर्मचारीहरु नै थिए । यी सबै चिजहरुको संरचना हामीले मिलायौं । अनि स्थानीय निकायको निर्वाचन गरायौं । निर्वाचनपछि सामान्य संरचनाको निर्माण भयो । यसरी मुलुकमा सुरु भएको संघीय अभ्यासको पहिलो चरण त्यो पनि आफ्नै ठाउँमा आइपुगेर सेवा गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्त हर्ष लाग्यो ।
त्यहाँ कति समय सेवा गर्नुभयो ?
दुई आर्थिक वर्ष धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरिया गाउँ पालिकामा प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा सेवा गरेपछि सिराहाको औरही गाउँपालिकामा सरुवा भयो । त्यसपछि धनुषाको हंशपुर नगरपालिकामा सरुवा भयो । र, अहिले पछिल्लो समय फेरि धनुषाकै लक्ष्मिनियाँ गाउँपालिकामा आइपुगेको छु ।
हामी संघीय अभ्यासको सुरुआती चरणमा छौं । यो अभ्यासमा पनि जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासनबीच नै मुनमुटाव छ भनिन्छ । यहाँ स्थानीय निकायमा प्रशासन प्रमुखकै रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?
सर्वप्रथम त हामीलाई सङ्घीयता नै किन आवश्यक हो ? हामीले यो प्रश्नको उत्तर खोज्नु आवश्यक हुन्छ । हाम्रो देशको पुरानो शासन व्यवस्था एकीकृत थियो । अहिले भएको गाउँपालिकाको सट्टा गाविस थियो, तर सानोसानो इकाईमा सीमित थियो । त्यो निकाय स्वतन्त्र थिएन । सानोसानो विकासको कामका लागि पनि जिल्लाको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाको थियो । विकास पहुँचमा सीमित थियो । एकीकृत र केन्द्रीय शासनले मुलुकका सबै ठाउँमा एकै खालको विकास नभएकाले संघीयताको सुरुआत गरिएको हो । संघीयता समविकासका लागि सुरु गरिएको हो । अब स्थानीय निकायमा हेर्नुभयो भने जनसेवाको लागि दुईवटा संरचना हुन्छ । एउटा अविच्छिन्न सेवा दिने प्रशासन हुन्छ र प्रशासनिक काममा केही गडबडी हुन्छ कि भनेर रेखदेखको लागि जनताले जनप्रतिनिधि निर्वाचित गरेर पठाएको हुन्छ । जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष हो भने प्रशासन अप्रत्यक्ष । जनतालाई निजामती प्रशासनले सेवा दिन नसक्ला कि भनेर नै जनप्रतिनिधिको आवश्यकता परेको हो । संघीयतामा यी दुवै संस्थाले मिलेर जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने हो । संघीयताले त जनतालाई घरदैलोमा नै सेवा उपलब्ध गराउने हो । यो काम स्थानीय निकायबाट भइरहेको हुन्छ । तपाईंले भन्नुभएको जस्तो प्रशासनलाई लाग्ने आरोप त त्यो हो तर जनसेवा प्रदान गर्ने अड्डामा प्रशासन मात्र होइन, जनप्रतिनिधि पनि हुने भएकाले जनसेवाको सवालमा प्रशासन र जनप्रतिनिधिबीच मनमुटाव हुँदैन । जुन यो कुरा म त पदमै बसेर प्रत्यक्ष भोगिरहेको छु ।
तराईमा यतिबेला लगातारको वर्षाले डुबानको समस्या पारेको छ, यहाँको गाउँपालिकामा स्थिति कस्तो छ ?
यहाँ खासै जनको क्षति भएको छैन । वस्तीमा पानी पसेको हुनाले केही घरमा पानी परेको हो । तर मुख्य कुराचाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा झण्डैझण्डै ७० प्रतिशतजति किसानले लगाएको धान खेतीको विनास भएको छ । हाम्रो गाविसमा सबैभन्दा बढी विनास १, २ र ३ वडामा औरही खोलाले गर्दा धेरै विनास भयो । अब समस्या के छ भने अहिले धान लगाउने सिजन पनि समाप्त भइसकेको हुनाले किसानसँग बीउ पनि बाँकी छैन । त्यसैले किसानलाई असाध्यै मर्का परेको छ ।
प्रदेश नम्बर दुई कोरानाको प्रत्यक्ष महामारीमा परेको प्रदेश हो । त्यसैले लक्ष्मिनियाको अवस्था कस्तो छ ?
कोराना भाइरस (कोविड–१९) बाट हाम्रो गाउँपालिकामा पनि प्रत्यक्ष असर ग¥यो । हामीले यो गाउँपालिकाका सबै घरधुरीलाई माक्स, स्यानिटाइजर, साबुन वितरण ग¥यौं र २ हजार ५ सय घरधुरीसम्म आफैं प्रत्यक्ष पुगेर खाद्यसामग्रीलगायतका राहतका सबै सामग्री वितरण ग¥यौं । यसका अलावा सातै वडामा वडास्तरीय क्वारेन्टाइनको निर्माण ग¥यौं । सुरुमा एक वडामा मात्र थियो क्वारेन्टाइन । पछि केन्द्र सरकारसँग प्रदेश सरकारले आइसोलेसनको जिम्मा लिएका थिए । उनीहरुसँग स्थान थिएन । त्यसैले हामीले हाम्रो स्थानमा आइसोलेसन निर्माण पनि गर्न दियौं र हाम्रो निगरानीमा त्यसलाई सुधार गरेर लग्यौं ।
अहिलेको प्रकोपको स्थिति कस्तो त्यता ?
अहिले त्यो धेरै नै कम भइसक्यो ।
परीक्षण कम भएर कम भएको हो ?
होइन, हामीकहाँ परीक्षणको दायरा झनै बढेको छ । सुरुमा भारतबाट धेरै नै मान्छेहरु फर्किएका र उनीहरुको परीक्षण गर्दा प्रकोपको दायरा बढेको हो । अहिले त्यताबाट आउनेहरुको संख्या पनि घट्यो र हामीकहाँ संक्रमितको संख्या पनि घट्यो । समयमै सजगता अपनाएको हुनाले कोरोनाको महामारी समुदायसम्म पुग्न पाएन । त्यसैले पनि संख्या घटेको हो ।
अब अहिले विदेश गएका युवाहरु स्वदेश फर्किए अब उनीहरुमा बेरोजगारीको समस्या हुन्छ । उनीहरुलाई अब यतै रोजगारी दिएर राख्ने योजना बनेको छ ? कि उनीहरु कोरोना हटेपछि फेरि विदेश नै जाउन् भन्ने चाहना छ ?
वास्तवमा यो हाम्रो सवालमा एकदम रम्रो प्रश्न हो । हामीकहाँ समस्या कस्तो छ भने प्रदेश नम्बर २ स्थित धनुषामा खेतीयोग्य जमिन एकदमै धेरै छ । तर यहाँको प्रायः सबै खेतीयोग्य जमिन बाँझो अवस्थामा छ । यो किन भयो त भन्दा यहाँको दक्ष युवा जनशक्ति सबै रोजगारीको लागि विदेशिएको अवस्था छ । यहाँको बाँझो खेतको त कुरै छोडौं, यहाँ बन्ने आधुनिक घरहरुको बनावटको लागि पनि विहारबाट कामदार आउनुपर्छ । इलेक्ट्रिेसियन, प्लम्बर, सिकर्मी, डकर्मी भवन निर्माणमात्र होइन एउटा घरलाई आवश्यक पर्ने अन्य जनशक्ति पनि यहाँ उपलब्ध छैन । यस्ता कामको निर्भरता विहार नै हो । फेरि यहाँ जनशक्ति नभएको होइन, यहाँको धेरै वडामा दलित वस्ती पनि छ, तर यहाँको जनशक्ति रोजगारीको लागि विदेशिने र यहाँ घरबार चलाउन पनि विदेशी कामदार आउनु पर्ने विडम्बना भनौं या यहाँको विसंगति भनौं वास्तविकता यस्तो छ । अब अहिले नोवेल कोरोना (कोविड–१९) महामारीका कारण भारतलगायत तेस्रो देशबाट धेरै नै कामदाहरु आएर बेरोजगार अवस्थामा बसेका छन् । अब यो जनशक्तिलाई प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमअन्तर्गत उनीहरुलाई सीपअनुसारको तालिममा अझ दक्ष बनाउने र त्यो तालिमसँगै उहाँहरुलाई रोजगारी पनि यही प्रदान गरिहाल्ने हाम्रो योजना छ । यसो ग¥यो भने मात्र उनीहरुलाई हामी रोक्न सकौंला अन्यथा उनीहरु फेरि पनि बाहिरिने सम्भावना हुन्छ । त्यसरी दक्ष जनशक्तिलाई यही रोक्न सकियो भने एउटा त उनीहरुसँग भएको श्रम यही सदुपयोग हुन्छ र अर्को बाँझो रहेको जमिन पनि क्रमशः खेतीको लागि योग्य हुन्छ ।
लक्ष्मिनियाँमा गाउँपालिकाको प्रतिनिधित्व कुन राजनीतिक दलले गर्छ र जनता उहाँसँग कतिको सन्तुष्ट छन् ?
हाम्रो गाविस अध्यक्ष तत्कालीन समाजवादी फोरमबाट निर्वाचित हुनुभएको हो । जुन पार्टी अहिले जनता समाजवादी पार्टी भएको छ । हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्ष अति नै धेरै राजनीतिक अनुभए भएको र हाम्रो यो मधेशको राजनीतिको लागि अति सक्षम व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । उहाँ स्थानीय राजनीतिमा कहिल्यै पनि जनताको नजरबाट छाया नपर्नुभएको व्यक्तित्व हुनहुुन्छ । उहाँको नाम विन्देश्वर यादव हो । अहिले ७७ वर्षको हुनुहुन्छ । अर्को कुरा उहाँ पूर्वराष्ट्रपतिको आफ्नै गाउँको मान्छे, सँगै पढेको, सँगै राजनीति गरेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । हाम्रो वर्तमान अध्यक्ष पहिला पनि यही गाउँपालिकाको अध्यक्ष निर्वाचित हुँदा पूर्वराष्ट्रपति डा.रामवरण यादव वडाअध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो भन्ने भनाई अध्यक्षको छ । त्यति अनुभवी र पुरानो मान्छे यो गाउँपालिकाको अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको छ ।
लक्ष्मिनियाँमा विकासका पूर्वाधारहरु कसरी अगाडि बढेका छन् ? त्यहाँ असारे विकासको पीडा छ कि छैन ?
सबै ठाउँमा कोरोनाको कहर थियो । तर लक्ष्मिनिया गाउँपालिका पनि त्यसबाट अछुतो थिएन । तर अध्यक्ष अत्यन्त्य पुरानो अनुभवी हुनाले हाम्रो गाउँपालिकामा विगत पुस महिनादेखि नै निरन्तर काम भइरहेको थियो । र त्यो काम अस्तिसम्म पनि जारी हुँदा हाम्रो गाउँपालिकाको योजनाका कामहरु झण्डै ९० प्रतिशत सकिएको अवस्था छ । अर्को कुरा हाम्रो गाउँपालिकामा भएका ६ हजार घरधुरीमध्ये २५ परिवारलाई त हामीले राहत नै बाँडेका छौं ।
अन्त्यमा लक्ष्मिनियाँमाका जनतालाई तपाइँको भनाई के छ ?
अहिले संघीयता आएको छ । त्यसैले सरकार तपाईंको घरदैलोमा नै सरकारको प्रत्यक्ष उपस्थिति छ । यो अवस्थामा जनताका समस्या जेजे छन्, ती समस्याहरु जनताले आफ्नो गाउँपालिकामा आएर व्यक्त गर्नुपर्छ । गाउँपालिका जनसेवामा प्रतिबद्ध छ । ंगाउँपालिकाबाट त्यो काम हुन सक्दैन भने कहाँ जाँदा काम हुन्छ, जनताको त्यो काम गराउने जिम्मेवारी गाउँपालिकाको नै हो, त्यसको प्रतिबद्धता गाउँपालिका अथवा स्थानीय सरकारले लिन्छ । अर्को कुरा हाम्रो परम्परागत पेसा कृषि प्रणाली नै हो । त्यसो भएको हुनाले हामी आफ्ना जमिन बाँझो राखेर र परिवारलाई रुवाएर विदेश नजाऔं । प्रचूर सम्भावना हामकहाँ यही छ । हामी यसमा लागौं स्थानीय सरकार तपाईंहरुलाई चाहिले सहयोगको लागि सधैं कटिबद्ध छ । अर्को कुरा, कोरोना महामारी (कोविड–१९) को महामारी कमी भएको जस्तो देखिए पनि त्यो कम भएको छैन, त्यसैले सरकारले जारी गरेको भनाईलाई पूर्णरुपमा पालना गरौं । त्यसो भयो भने हामी यो महामारीबाट जोगिने छौं ।